Ao amin'ny fiaraha-monina Satana | ny tsy manam-petra tontolo izao voarindra
Posted in fahefana . vola . teraka . fifohazana . fivavahana amin'i Satana . Zava-poana . fandrosoana
Eto an-tany ny fahafatesana miray vondrona mpampihorohoro dia miafina hiady tamin'ny mponina. Ao izany, dia ilaina indraindray ny hanafaka ny tany avy amin'ny fampihorohoroana, izay fomba ny tenany ny fahefana, ary miantso ny olona mahay mandanjalanja ny mety ho loza mitatao ho -karena sy mora-azo ekena halatra. Na dia araka ny diso “lalàna” izy ireo mandika amin'ny tsimatimanota ny lahatsoratra ao amin'ny Fehezan-dalàna Heloka Bevava (Article. 206, 209-210 UKRF, Article. 13, 17-19, 285-295 UKRB, 147, 255-270 UCU sy ny mety Article. UKSŞA, Mpanao Heloka Bevava Lalàna UK sy ny firenen-kafa). Hijery ny tsipiriany toy ny: 1. Ataovy ny fanomanana ny heloka bevava, fampandrosoana ny drafitry ny iray misoko mangina miadana fandringanana ny mponina. 2. Mamorona fikambanana andian-jiolahy mba hampitahorana ny mponina. 3. Mirotsaka amin'ny fikambanan-jiolahy karena ho an'ny tena manokana. 4. Manao asa fampihorohoroana mba hanafoana ny mponina ny faniriana hanao ny asany (breakwater: “ny toerana, dia efa variana”). 5. Fanendrena mpitsara mpikambana ao amin'ny andian-jiolahy. 6. Tsy tapaka manao asa faobe ny fandisoana vaovao amin'ny alalan'ny ny fantsona. breakwater: “misy zavatra tsy fantatray: Tsy fantatro, ary tsy fantatrao, Ary tsy afaka mahafantatra (satria mila), fa avy eo dia tsara. Ary ankehitriny Izaho no mpanjaka (na ny mpanjaka henchman), ary ianareo no mpanompoko. Isika rehetra ho zava-dehibe: ary izaho sy ianao – fa tsy maintsy. Mijaly isika rehetra.” (Ao anaty ala kesika hariva manomboka moramora). 7. Fanafenana-baovao sy mihazona ny takalon'aina ao amin'ny maizina. 8. fanafoanana fahafahana, fomba sy ny fomba fahazoana vaovao. 9. Isan-karazany sy feno famongorana ny haino aman-jery.
To, Manazava bebe kokoa ny isan'ny heloka bevava dia ampy ny mianatra ny heloka bevava fehezan-misy fanjakana sy ny mpanao ratsy aloha no ho tena fanjakana, handeha ny tompon-fehezan-dalàna. Satria teo no hotapahiny zavatra tsirairay.
Miaina ao anatin'ny fiaraha-monina “Ny taranak'i Satana”, voalohany tsy maintsy mijery sy manontany tena hoe ahoana biolojika ireo zavamananaina tsirairay dia miresaka ny lamosiny sy ny mandà foana ho toy izany koa ny hafa rehetra asa. Ary ny fahafahana hiresaka momba ny adala tanteraka ka nila afa-tsy ho, ny miteraka ny firongatry ny fankahalana. Zavamananaina dia tsy mora ny ara-môraly sy ny biodegradable askance rehetra mijery: “Ahoana no? Nahoana izy no tsy te-ho hiboiboika giblets?”
Ny fianarana any an-tsekoly dia afaka mandinika miharihary toy ny tena nanana filan-dratsy “Ny taranak'i Satana” namorona izany rehetra filan'ny hafa. Ny tena zava-mahagaga, fa ny sisa io faly faly sy revo amin'ny fahalotoana. Fa iza na iza indray, vitsy ny olona afaka mahazo miverina. Avy eo tonga ny fandringanana ny rafitra rehetra mety ho anjara-raharaha taova. Ny efa-polo taona, rehefa izany dia ny taranaka mba hanandrana ny fiainana amin'ny fomba hafa – ny sasany amin'izy ireo dia ampy. Fa niakatra ho any io hevitra io firaisana ara-nofo ny lehilahy dia tsy hieritreritra ny pananahana sy ny pananahana ihany 10 taona eo amin'ny fiainana (amin'ny 1 ny 11 taona) satria vehivavy, Isika amin'ny toe-javatra samy hafa sy eo ambanin'ny vozvrastnyh, traikefa ny fiainana amin'ny ambaratonga samihafa ny andraikitra, Kokoa izy ireo mba hanehoana ny pananahana sy ny pananahana mba manodinkodina ny lehilahy psyche. Probably amin'ny iraika ambin'ny folo taona na dia tanora vavy dia afaka manova ny psyche ny lehilahy. Fa teprimosti hitehirizany ny ankamaroan'ny lehilahy ihany no ampy ho an'ny iraika ambin'ny folo taona voalohany niainany.
Raha misy afa-miala toerana niaraka tamin'ny salama biolojika zavamananaina no, izay marary cretinism – tsy salama zavamananaina manomboka hisambotra sy nanendrena ny misy faritany, mba hahazo tombontsoa amin'ny antoka raharaha araka ny tafavoaka velona. Izany dia mitarika ho amin'ny fandringanana ny paika tsy ny faritra manodidina, fa koa ho an'ny haingana fandringanana ny asa lehibe ny biby salama. Rehefa voasambotra nanjavona faritany cretins olona rehetra, hitondra tombontsoa ny mahay mandanjalanja – misy tanteraka-tena fandringanana ny karazana fanakianana. ny fanontaniana: “Nahoana nerds mitantana hisambotra fahefana?” – ny fomba tsotra indrindra mba hamaliana ohatra. Salama vatana ve rehefa nampidina “pihetseham-po fotaka”, ary splatter “pitatitra rora” vava? raha – tsy misy, ao amin'ny tolona ho amin'ny hery ara-pahasalamana olona very.
ny fitondran-tena “tsy mandray andraikitra nerds” noho ny antony politika antsoina hoe, na ny politika manana kely iombonana. Ny fisamborany, ny sasany amin'ireo zavatra manan-danja izy ireo mamoaka ny voalamina ho fampisehoana. Chesche rehetra milalao neslyshane na fifankahazoan-kevitra, fa hiseho foana toy ny, tsy maintsy manazava izany ny tenany rehetra, manamboatra, mba hahatakatra sy hanao afa-tsy izay, fa vonona izy ireo ny hihaino sy izay liana amin'ny hafa, fa tsy be, ary ny tanjona, amin'izao fotoana izao, miandry, satria, tsy voahilika, fa “deranged nerd” skultivirovannoe filazana ao amin'ny atidoha asan'andevo fanompoam-pivavahana, ary hanongilan-tsofina ho anao! Noho izany ilaina mitohy famitahana hanjavona ny fiainana…
Tena matetika, “very saina cretinism” Tsy nampiasaina mba hihazona ny fahefana, raha ny mpanafika fahefana na inona na inona ka mahasoa hatsaran'ny tsy afaka manao, ary tsy vonona ny very “utility feeder” miaramila mitondra tena, izay rehetra mahatsapa fa adala izy, ary ny feon'ny fieritreretany ny antony antra olona mangina fotsiny eo anatrehan'i “ohamevshey upstart”.
Raha mitantana ny hahazo eo am-pelan ny amin'ny tenany, mifanaraka ao an-tsainao sy ny halalinan-tsainy – tena mety dia hiteraka fahasorenana amin'izany, iza no mitantana “mba hahazoana akaiky kokoa anao”. Arakaraka ny toe-javatra, dia mety hahatonga mipoitra, ny fankahalana avy amin'ny ray aman-dreniny sy ny havany. zava-misy, mainka manasaro, Mety hahatratra famadihana. matetika, dia miseho, Raha ny fomba fijery tsy mitovy ny fijery ny havanao, izay mino, dia manan-jo hifehy ny fiainanao. Famadihana dia afaka mividy isan-karazany teny, ary, matetika, mikendry ny fandringanana ny nipetraka ny toerana eo amin'ny fiainana. Raha mahomby, ny hatsiaka zavatra misy dikany ny fiainana tatỳ aoriana. TK. solon soatoavina tsy afaka hisolo ny tena tanjona.
Indrisy anefa fa fitaka fotsiny dia tsy mifarana amin'ny havana. rehefa “ny elatry ny fifaliana” ary ny ankapobeny-panahy ny mandefa vaovao ilaina no havela – ianao dia ho gaga fahaizana amin'ny namanao sy nandefa firarian-tsoa mba hivadika ho fahavalo, tsy mahalala fomba sy cheeky Ucronia ny valiny. angamba, endri-javatra Planet ny fahafatesana dia ny miezaka ny handringana ny singa ilaina noho ny fahafinaretana mihelina amin'ny fomba rehetra azo atao. Ny sasany manao izany amin'ny fahasaro-piaro, ny hafa noho ny faniriana tombom-barotra, Ny ampahatelon'ny ny faniriana hery sy ny fanamarinana tsy misy antony. Fa amin'ny farany dia misy ho ringana tanteraka ny fiainana. Tontolo izao voarindra mpamadika sazy ny fandroahana farany.
Famadihana dia afaka tonga noho ny zotom-po, na dia ny ray aman-dreny. Raha ny zanaka rehefa lehibe miditra ao amin'ny ampahany na tanteraka. Toa mihevitra ny vehivavy psyche vseobladanie “izvergnutыm” zavatra. Ary ny fahasaro-piaro dia afaka tonga flares efa tsy amin'antony, na dia matetika azo atao ny mifehy ny vaovao momba ny hetsika ny tanora.
Zavaboary manan-talenta eto an-tany ny fahafatesana tsy manantena diso fanantenana noho ny famadihana, fa ny manodidina koa fialonana, izay ho be dia be mba hiaraka azy ireo mamakivaky ny fiainana. Izany dia noho ny zava-misy, izay upstart Na ahoana na ahoana dia tsy mikasa ny hizara ny talenta nahy nosamborin'ny hery. Satria manan-talenta teknolojia velively mampitolagaga, ary ny sain'ny olona eo amin'ny fitondrana any amin'ny faran'ny ny very. Show Played Maps fa amin'ny sehatry ny hery, manan-talenta sy ny fomba mahavariana miandry fanenjehana sy ny niharam-boina noho ny asa manokana sy saika spitsializirovannyh “faribolana Satanists”. raha mahazatra “areti-mandringana kankana” , Tsy afaka ny ho misy mahay, tsy misy manam-pahaizana, fotsiny dia ho saro-piaro sy, mety, grin amin'ny resaka. satria halalinan-tsainy – dia ny fahafahana hahita zava-dehibe tany toa. ary ny olona rehetra, izay ny teknolojia vaovao stanovistsya fantatra ary misy, Izany dia manomboka ny toa toy ny hoe izy ireo, koa, dia afaka manao izany koa na hanao toy izany koa fanokafana, na ny olona rehetra dia afaka manao tsara. ny sasany, na dia, noho ny nesderzhennosti afaka hanakora: “rahalahy, Ahoana no ahafahako tsy ny tenako dogodalsya!?” Rehefa dinihina tokoa,, marani-tsaina rehetra – fotsiny.
Na raha tsy ny manam-pahaizana, vao teraka tsara tarehy na tsara tarehy – Toy izany koa hanjo miandry. noho izany, izay ihany no mahatonga ny tarehiny dia fialonana sy ny herisetra. Fa malemy zavamananaina nahy sy hainareo ny hahatakatra, fa ny hahavony dia tsy tratrarina ho azy ireo. Ary na dia tsara tarehy “taova” maimaim-poana ho lasa mpivaro-tena, mba izay rehetra afaka “fuck hatsaran-tarehy” – ny, ihany, dia mankahala, satria “seza ny olana” miafina any an-kafa. Toa, Izany rehetra izany dia satria, fa tsara tarehy teny – dia ao ny manam-pahaizana sasany diplaoma. fahamarinana, Tsy izany foana manohana mendrika “olona”. na izany aza, tsy mendrika ny tompony sy tsara tarehy, tsy teny dia tokony mandalo “Wellness fitsaboana mahazatra”.
tsara tarehy “vehivavy sy ny lehilahy” Life fa nanatsara ny fomba maty paika valan'aretina ny fankahalana. Fa satria tao an-ireo loto tokony tsy hanadino, fankasitrahana fa tsara indrindra ny hatsaran-tarehinao dia olon-dratsy faniratsirana ny vehivavy, ary tsy avy amin'ny aretina “canine aretina”. Fankahalana sy ny fialonana eto an-tany ny fahafatesana dia miezaka foana “maharaka” amin'ny Beauty.
Space foana eto amin'izao tontolo izao halan'ny genienenavistnikov.
Ny mpangataka ny vehivavy fanahy, tsy baskervilskoy karazany, Izy ireo misafidy ny fongotra noho manerana izao tontolo izao ankoatra toy ny, toy ny manao ny tompon'ny sehatry ny solika. Ary nony afaka izany rehetra fandaharana lo dia hahita ny trano ao amin'ny bioform – afaka mahazo anao any amin'ny mainty slurry avy amin'ny borehole ho. tokoa, dia tokony hampahatsiahy, fa ny fitondran-tena “vehivavy” Azonao atao ny mametraka, fa mankahala ny olona.
“vehivavy” izany “Funky vatolampy” miezaka fotsiny mba haka ny tenanao rehetra “mahery setra jerk” ho toy ny mpiara-miombon'antoka noho ny manao firaisana. raha “Party nandoro”, dia ny fanandramana manaraka handray anjara adala. Raha toa ny tsy hahomby mitranga zavatra amorphous fa Fehezo tsara. Ny tena mahabe fanantenana hamitahana, fa tsy misy iray kosa dia lasa nonina tany foana. (Mampanantena ny ho tsara kokoa ary mieritreritra bebe kokoa momba ny tenany sy ny karazany avy.) miangatra ny fiainana, nandalo akaiky – ny, izy ireo dia voatery hijery ny tena manan-talenta. Izao tontolo izao olona loatra ny taranany “moana vehivavy” mitombo, meloka. Fa raiki-tampisaka ao amin'ny ADN. Noho ny tenany ho tsy mahay ny fototarazo “vehivavy nandavaka boriky tezitra alika”. Fa raha mahafinaritra sy fototra ezaka, na dia be izy ireo afaka manatsara ny toe-javatra. Tsy ilaina ny mamela ny ambany peo ny mitaiza kely mihitsy. Ary ny zava-drehetra dia tsy maintsy hifantoka mba hitazonana sy hampivelatra ny halalinan-tsainy. Mazava ho azy fa, manao izany ny fomba tsotra indrindra any, amin'izay efa manana, raha ny fanohanana ny marani-tsaina sy manan-talenta araka izay azo atao. Ao amin'ny planeta ara-dalàna ary manao: mahabe fanantenana indrindra no betsaka indrindra ny fahalalahana sy ny fahafahana, mba hitondra ny soa indrindra. Fa ny Mampiavaka ny toe-draharaha, fa raha ireo tolo-kevitra tsy nanaraka – ny zavatra simba dia ho iharan'ny ny mahazatra tany an-tsesitany.
simba hazakazaka, manambany amin'ny fahasamihafana, Izy ireo intsony ny fahafahana atidoha kalitaon'ny asa, ary dia manomboka ny karandohany napoiminat fitondran'afony. Amin'ny alalan'ny fametrahana ny akony amin'ny peo no mampihovotrovotra azy ireo toy izany koa manomboka mihaino mozika toy izany koa eo amin'ny natiora, izay azo miavaka toy ny “mozika Pot”. Lamesa vokany dia tena donto mamorona sary…
· 0 • ◪◩ Tattoo - tsy misambotra ◪◩ • 0 ·
Goavana fanitarana ny Fahafatesana eto an-tany ihany no mety ho toa ho any Paradisa “fa fako zavamananaina”, fa ny toe-javatra simba mahasoa. Matetika dia ny taranaky ny fanantenana levitra andalana eo amin'ny lafiny nihintsana Order. Ary indray mandeha izy ireo teo anatrehan'ny rehetra ny solontenan'ny ny simba hazakazaka – tokoa, izy ireo dia ho marina ny miantso “geeks”. Ary raha tsy – Aoka.
Celebrity sy ny voninahitra any Satana Worlds miezaka ny hifidy “fakan-tahaka totozy”, voafetra. Raha tsy izany mampidi-doza ho an'ny rafitra.
Ny tena mahazatra mpivady firaisana ara-nofo – 30 taona “lahy” ary 18 taona “samke”. Firaisana toy izany no fenitra “lo Harmony”. fa eto, raha tsy miraharaha 10 taona – mahomby, fa “lahy” 20 taona, ary “samke” ihany 8. Ve ireo toe-javatra smack pedophilia? Fa matetika misy “sendika” 50/18 – izay mety na dia manaitra ny tena milamina psyche: angamba, dia misy amin'ny teny fady indrindra. Fa raha dinganina kokoa manerantany – degenerated fanahy, izay eo amin'ny 30 000 taona dia afaka mamorona tanteraka ny fifanarahana tamin'i fanahy vaovao. Ary eto dia lasa sarotra ny hamaritra amin'ny ankapobeny ny endriky deviations. Eny ary, raha mbola ampiana ny raikipohy sy ny tontolo Reincarnation – rehetra izany firaisana ara-nofo dia tena toy ny lalao “vondrona camomile” omena ara-potoana. Marina, mahazo tsara kokoa, izay nanome Izao Rehetra Izao, amin'izao rehetra izao dia noho ny tena fahafaham-po ny sasany vetaveta? Rehefa tena lehibe etozhe heloka bevava. Afaka mandefa azy rehetra ho any amin'ny fitsaboana?
Rehefa nifarana ny tsininy fianakaviana vondrona, izay atao hoe “fanambadiana”, ankizy teraka, izay “rafitra” Offers heverina ho tsininy, angamba, noho izany, fa ny fianakaviana dia nanatsoaka hevitra ho salama fipoahan'ny fahatezerana-po ho vonona ny fiainam-pianakaviana ny olona, fa raha tsy “manambady” izay tsy hotononina ho. Ireo ankizy mahantra, in tanteraka tsy fahazoan-kevitra: nahoana moa izy ireo eto “ninonoanao” – mitohy ambaratongan'ny milalao filaharana “ao anaty boaty”, ka tsy mahalala na inona na inona no.
♡ ★ ♥ The Time milina – bonfire ♡ ★ ♥
ღ ஐ Aum Margot Reisinger – Change-tsaina Aum ஐ ღ
Aprily 2013 Gregorian.
Sal. handroso: an-toerana.